Video: Muujinta horumarka mawduuca cusub ee DesdeLinux | Laga soo bilaabo Linux
Dhamaantiin waad salaaman tihiin. Waxaan ka shaqeynayay soo-jeedin cusub oo ku saabsan mawduuca barta muddo dheer, marwalbana waxaan raadinayay noocyada dambe si ay u fududaadaan, uga fudud yihiin uguna gudbiyaan khibrad wanaagsan isticmaaleha na soo booqda
Taasi waa sababta aan u sameeyay wax yar Shaashadda si ay u arki karaan fikradaha aan u qabo nashqadeynta cusub dabcanna waxay i siiyaan ra'yigooda, shuruudaha, soo-jeedinta ama dhaleeceynta iyada oo loo marayo faallooyinka.
Sidoo kale Waxaan abuuray mawduuc kulankeena ujeedkan. Aniga oo aan isku mashquulin, waxaan kuu daayey fiidiyowga, oo aad ka dhex arki karto 10 Daqiiqo oo laga soo qaatay Linux toos ah:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Laga soo bilaabo Linux » Fiidiyow: Muujinaya horumarka mawduuca cusub ee DesdeLinux
Dadaalka lagu doonayo in lagu sii wado hagaajinta bulshada waa la mahadiyey.
Sii wad wadaagista! habsiinta dhammaan.
Mahadsanid… ^ _ ^
Waan ka helay, inkasta oo nashqadda hadda jirta aysan u muuqan wax xun, haddana waxaa laga yaabaa inay horeba ugu baahato weji hagaajin
Naqshad wanaagsan iyo fikrado,
Mahadsanid .. 🙂
Waxaan jecelahay naqshadda mustaqbalka inay qurux badan tahay oo om ay leedahay xulashooyinka loo baahan yahay 😀
Sidoo kale waan jeclahay
Waxaan ku biirayaa mahadcelinta, runtii aad ayaan u fiicanahay in la ogaado in waxaas oo dhan ka dambeeya ay jiraan dad aad uga walaacsan faahfaahinta oo dhan.
Xaqiiqdii waa isbeddello sax ah, way fiican yihiin.
Mawduucu aad buu u wanaagsan yahay, aad baan u jeclahay, waxaan u arkaa inay fikrad wanaagsan tahay in qaabkan loo abaabulo qaybaha mashruuca ... laakiin wax aan mar walba dareemayey inay iga maqnaayeen ayaa ah «khaanad taariikhi ah». way socotaa wax badana way socotaa (Waan ogahay inaan ku raadin kari lahaa ereyada muhiimka ah, laakiin wali, waa uun soo jeedin).
Shaqo wanaagsan elav. Waxaan sugayaa xamaasad.
Dhab ahaan, waxaan u maleynayaa inay kaliya ku qasbanaan doonaan inay dhigaan wijidka "Archive" ee WordPress leeyahay, waxay abaabushaa iyaga sanado iyo bilo.
Way fiicantahay in wax la abaabulo, laakiin waa waxoogaa laba jibbaaran dhadhankayga; iyo in midabka casaanka ahi u muuqdo mid murugo leh buluugga, laakiin isbeddelka asalka xagga abaabulka ayaa aad u wanaagsan.
Ku jawaab lubuntu
Waxay u egtahay mid aad u fiican, iyo fiidiyoow wanaagsan oo jidka ku jira.
Maxaad u leedahay lahjadda Cuba? LOL 😛
Eeg, waxaan isku dayay inaan tirtiro lahjaddayda, laakiin ma idlaanayso 😛
Kan Kuuba waa Kuuba .. Wiil aad taqaanid .. !! (Ixtiraam leh)
Salaan iga timid Mexico.! 🙂
hahahaha waligay ma maqal elav (waxaanan rajaynayaa inaanan maqal) hadalka sidan oo kale ah talk
Waxaan haystaa lahjad Peruvian ah (dhalasho) iyo Isbaanish (ka yimid kaftan).
Sikastaba, ma isticmaashay RecordMyDesktop?
Waxaad haysataa wax Isbaanish ah laakiin sida «posero». xD
Waxaan u qaadan lahaa faallooyinkaas inay yihiin haa, illaa inta aad muujineyso wejigaaga (ah, si fiican, ma tihid).
Aha, wax kasta oo aad rabto, laakiin taasi macnaheedu maahan inaad tahay qof jilicsan. xD
¿Xul, aniga? Uma maleynayo.
Sidoo kale, adiga ma dhiirrigelisaa?
Waad ku fashilantay markan posero, nasiib wacan waqtiga soo socda.
Aynu ka hadalno waxa laga wada hadlayo. Si kale haddii loo dhigo, cidina ma daneyso haddii X ama Y qofku yahay 'poser' ama waxkastoo, halkan waxaan ka hadleynaa soo jeedinta mawduuca ee laga soo bilaabo FromLinux, mise maya?
Si aad meesha uga saarto inay wax uun yihiin ama wax ololaya, weydii isaga sababta uu u leeyahay "posero" (haddii jawaabta ay sax tahay, waad soo dhigtaa; haddii kalese, waxaad tirtireysaa wadahadalkan).
Meel -marin dijo
Waxaan jeclahay naqshadda hadda jirta. Ma arko sababta loo badalayo. Codso waxyaabo ka sii fiican waxaa jira caqabadda.
Ku jawaab Traspass
Nin, sababtoo ah kuma noolaan karno waagii hore, waxaana jira howlo cusub oo ay tahay in la hirgeliyo. 😉
naqshad aad u wanaagsan !!! Waan ka helay 😉
Hagaag, waan ogaaday taas (raaxaysi la'aan darteed waxaan ugu beddelay Opera 12.16-kii hore astaanta cusub ee Debian Iceweasel).
Dildilaac, fiidiyow weyn job shaqo fiican.
Caadi ahaan waxaan booqdaa bogga, in kasta oo aanan inta badan faallo ka bixin, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan sameeyo dhawr talo ama faallooyin yar:
- Qaybta iftiimisay ee ka muuqata casaanka: Ka waran midab kale oo ku martiqaadaya isticmaalaha inuu soo galo, ama gujiyo? Waxaan u maleynayaa in midabka casaanka badanaa uu leeyahay macno xaddidan, mararka qaarkoodna markaan arko fiidiyowga wuxuu i siiyaa dareen ah inuusan ku saabsanayn waxyaabaha muhiimka ah, laakiin ay wax ka khaldan yihiin astaantaada: maxaa yeelay sawirkaaga ayaa muuqday iyo wixii la mid ah ... Waxaa laga yaabaa in midab kale uu siiyo dareen wanaagsan ...
- Qaybta faallooyinka: aad u fiican.
- Bakhaarka: looma baahna.
- Soo jeedin: Markaan arko inaad haysato laba mashruuc oo kale oo loogu talagalay FirefoxOS iyo Android… Ka waran ku darista xiriiriye nagu martiqaadaya inaan ogaano oo aan booqano mashaariicda? Waxaan u maleynayaa in mustaqbalka, haddii ay ku sii koraan habka ay wax u sameynayaan, waa inay dib u abaabulaan waxoogaa: laga yaabee inay abuuraan nooc bog ah oo kaliya mashruucaaga guud ahaan, halkaasna, ka jabi waxyaabaha gaarka ah mashaariicda: FromLinux, FromAndroid, FromFirefoxOs.
- Soo jeedin kale: Way fiicnaan laheyd haddii aad bilaabi laheyd mashruuca sameynta majallad ku taal Flipboard. Anigu ma arag mid ka mid ah Linux, runtiina waa wax fiican.
Hagaag, waa talo soo jeedintayda iyo faalooyinka. Waad ku mahadsantahay shaqada iyo dulqaadka aad noo haysay 😀
Waad ku mahadsantahay soo jeedimaha .. Waan xisaabtami doonaa wax walboo aad ii sheegto 😉
Ma isku dayday sida ay ugu egtahay font Inconsolata? waxaa loogu talagalay terminal, aad u fiican.
Waxa igu qancin waayey ayaa ah inay adeegsanayaan font Ubuntu hadaanan fahmin khalad, laakiin aan aragno sida.
Sidaan ku idhi madasha: Waa wax cajiib ah !!!
Runtu waxay tahay inay ku dhowdahay waqtigii degelku lahaa isbeddelkaas, laakiin waxay i siinaysaa dareen ah in mawduuca lagu hagaajiyay sida ugu fiican ee mawduuca aad lahayd ka hor intaadan ku biirin UsemosLinux.
shaqo aad ufiican saaxiib
Runtii waan jecelahay shaxankaan iyo kan cusub, marwalba waxaan doonayay inaan yeesho mid lamid ah laakiin waxaan u maleynayaa inay tahay inaan siiyo mid la bartay maxaa yeelay si aan u sameeyo shaqadan noocan oo kale ah laga soo bilaabo xoq haddii aad aqoon u baahan tahay… xushmadayda elav ……… ……. salaan 😀
War nimanyahow!, Waan ku faraxsanahay, sidee baad u samaysaa abuurista waxyaalahan? Waxaan u isticmaalaa rashka si aan u sameeyo shaxankayga ka dibna waxaan ku dhammeeyaa riyaaqeyaha. Waxaan jeclaan lahaa inaan sameeyo wax la mid ah kan Linux, maxaa yeelay waxaan arkaa in waxyaabo wanaagsan lagu sameyn karo OS-kan sida daaqadaha.
Jawaabtaada waan sugayaa, salaan.
Uff, DrewamWeaver? ... maya maya, maya kaftan, halkan waxaan wax ugu qabannaa koodh nadiif ah, aakhirka barnaamijyadaasi waxay gelinayaan nambarka qashinka iyo waxyaabo badan oo aan loo baahnayn.
Aad u fiican !! Waan jeclahay naqshada cusub….
Tan iyo markii aan layaabay… maxaad u adeegsataa shaashadda? Waxaan jeclaa inay haysato kamaradaadu sidoo kale 😉
Aan aragno haddii aan haysto waqti aan ku sameeyo shaashadda shaashadda shaashadda.
Weyn waan jeclahay balooggan, waxaan u baahday inaan u guuro Windows arrimo quseeya tacliinta laakin wali waxaan ku socdaa labo boot oo Xubuntu 😀 ah
Waxaan jecelahay naqshad aad u wanaagsan sidoo kale waxaan ka faalloodaa in lahjadaadu sidoo kale i farxad geliso:
Waan ka helay sida ay u ekaan doonto .. !!
Waan jeclahay abaabulka qaybaha 😀
Khadadka bilicsanaanta ayaa la hayaa (iyadoo qaar ka mid ah isbeddellada lagu guuleystay) iyo marin u helka iyo macluumaadka la xiriira dib loo habeeyay.
Waxay ila tahay guul. Mid ka mid ah baloogyada ugu wanaagsan ee aan aqaan: jaangooyada waxyaabaha ka kooban iyo waliba qaabeynta.
Shaqo aad u fiican oo aad ku sameysay barta:]
Isbeddelo aad u wanaagsan, kaliya midabka cas ma i qancinayo, iskuday midab kale ... qunsulka marwalba wuxuu iila muuqdaa inaan jeclahay cagaar (qoraal) madow (asalka).
Salaan ka dib aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin dadaalka aad ugu jirteen dayactirka Blog-kan oo shaqsiyan wax badan i taray.
Ku jawaab hpardo
Sawirka meeleynta Marcos Escobedo dijo
Waligayba waxaan ka mid ahaa fikradda ah in farta wanaagsan ay naqshad wanaagsan xitaa ka sii qurux badan tahay. Waxay noqoneysaa mid raaxo leh. Nasiib wacan iyo bog fiican good
Jawaab ku bixi Marcos Escobedo